Madaxweynaha Galmudug oo gaaray deegaanka Xero-dhagaxley +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Galmudug oo gaaray deegaanka Xero-dhagaxley +(SAWIRRO)
Madaxweynaha Galmudug oo gaaray deegaanka Xero-dhagaxley +(SAWIRRO)
Mudug (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa weli ku guda jira socdaalkiisa, uu ku marayo Gobolada Dhexe, waxaana uu Isniinta maanta ah gaaray deegaanka beeraha caanka ku ah ee Xero-dhagaxley ee Gobolka Mudug.
Wafdiga Madaxweynaha Galmudug oo ka amba-baxay Degmada Hobyo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Xero-dhagaxley, isagoona dadka deegaanka kula hadlay.
Madaxweynaha ayaa bulshada deegaanka kaga mahadceliyay soo dhaweyntooda diiran, iyadoo uu ku ammaanay sida ay ugu heellan yihiin tacabka beeraha iyo wax soo saarka, waxaana uu ku boggaadiyay in ay xil iska saaraan ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa bulshada deegaanka u ballanqaaday inay heli doonaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha, sida biyo nadiif ah iyo weliba waxbarasho.
Qoorqoor ayaa safarkan uu ku tagay Xero-dhagaxley waxaa ku wehlinayay qaar ka mida Golihiisa Wasiirada, Xildhibaano Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ka tirsan iyo siyaasiyiin.
Ugu dambeyn, socdaalka Madaxweyne Qoorqoor ee Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa la xiriira xoojinta nabadda iyo horumarinta deegaanada Galmudug.